Cyber Coder It Share Site
August 7th, 2012 Greeting 1 Comment » အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ
ကျွန်တော် ဆိုဒ်တွေလဲ မနဲတော့ပါဘူးဗျာ ဟိုရွှေ့ ဒီရွှေ့လုပ်နေရတာလဲ အဲဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော်လိုက်ဆုံစမ်းနေတာပေါ့ဗျာ
တနေ့တော့ FB မှာအမှတ်မထင်တွေ့လိုက်ရတာရှိပါတယ်ဗျာ ကောင်လေးတယောက်က ဘင်္ဂလား .co.cc တွေလိုချင်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျာ သေချာကြည့်လိုက်တော့မှ ကျွန်တော့်ညီတယောက်လိုခင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့နဲ့ မတည့်တဲ့ MHU party Chat ကို ၀င်ဖျက်သွားတဲ့ညီလေးတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဗျာ ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး သူ့ profile တချို့က
Name – Pyae Phyo Thaw
Website – www.tayelay.co.cc
Account – tayelay98@gmail.com
Edu - Grade 8
ပါပဲဗျာ သူ့ဆိုဒ်ကိုပြန်လုပ်လို့ရပါတယ် ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်မလုပ်တော့ပါဘူးဗျာ ရန်ကိုရန်နဲ့စတာမကောင်းပေလို့ပါပဲဗျာ အခုအချိန်ကစပြီးကျွန်တော် ပြန်ရေးပြန်လုပ်ပါတော့မယ်ဗျာ ဘယ်သူဘယ်လောက်ဖျက်ဖျက်မပျက်တော့ပါဘူးဗျာ ကျွန်တော်ကမှတ်ထားပါတယ်။
.com ၀ယ်ပြီးမှ သေချာရေးတော့မယ်ဗျာအခုတော့ အကြမ်းဖျင်းလေးတွေအရင်ပြောသွားပါ့မယ် May 15th, 2012 Anti-Virus, Computer, Registry No Comments » Recycle Virus Cleanner
ကဲကဲ ဒါလေးကတော့ Recycle Virus သတ်ပေးမယ့်ကောင်လေးပါပဲ တချို့ ဆိုင်တွေက ဗိုင်းရပ်ပေါတယ်ဗျာ ကျွန်တော် ကိုယ် တိုင် ကိုယ်တွေ့လေးပါပဲ သူက Double Click နှိပ်လိုက်ရင် ခဏစောင့်လိုက်ပါ အကုန် သတ်ပေးပါလိမ့်မယ် ဟီး ဗိုင်းရပ်နော် ကျွန်တော်ကို တနေ့ သူငယ်ချင်းက ပြောတာ အဲဆိုင်က ဇာတ် ကားတွေ ကကောင်းတယ်တဲ့လေ တခြားမဟုတ်ပါဘူး Dota Impossible ဇာတ်ကားတွေပါပဲဗျာ အဲဒါကူးခိုင်းတာလေ ဗိုင်းရပ်ပါတယ် မပြောဘူး ချစ်ဆုံး တွေက ကိုက်မှ အေးမင်းကိုပြောဖို့ မေ့နေတယ်တဲ့လေ ဟီး မတက်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာကို. အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော် လဲ သိပ်မလုပ်တက်သေးဘူးလေ အဲအချိန်တုန်းကတော့ နောက်တော့မှ သေချာပြန်ရှာတော့တွေ့တာပေါ့ဗျာ အဲဒါနဲ့ပဲ သတ်လိုက်တာ ထူးစမ်းတယ်ဗျာ ဘာနဲ့ မှ မသေတဲ့ ကောင်က အဲဒါနဲ့ လဲတွေ့ရော အပစ်လုပ်ထားတဲ့ ကလေး သူ့ အဖေ ကိုကြောက်သလိုပဲဗျာ ဟီး အဲလိုပဲဗျာ ဗိုင်းရပ်ကလေ သူ့ဆွေမျိုးတွေကိုပါခေါ်သွားတယ်ဗျာ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လဲ ၀မ်းသာ အားရ ထပ် ကူးတယ် ထပ် သတ်လိုက်တော့ သေသွားပါတယ် အဲဒီတော့အားရလို့ ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ ကဲကဲကျွန်တော်လိုပဲ မဟားတရား ကူးပြီး မဟားတရား ပြန်သတ်နိုင်ပါစေ ဆိုတဲ့ ရည် ရွယ် ချက်လေးနဲ့ ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ကဲကဲ မဟား ဒယား သတ်နိုင်ကျပါစေဗျာ အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါဦး May 15th, 2012 Converter No Comments » Xilisoft Video Converter
Xilisoft Video Converter v3.1.9.rar လေးပါပဲဗျာ ဖန်ရှင်းကတော့ စုံပါတယ် ကျွန်တော် တောင် မအားတာနဲ့ဗျာ တခြားမဟုတ်ပါဘူး နှလုံးသားရေး ဘာရေး ညာရေးတွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေလို့ပါပဲဗျာ ဟီး အရေးထဲ ရန်ဖြစ်နေရတော့ စိတ်လဲမကောင်းဘူး ဘယ်လိုဖြစ်လဲတော့မသိပါဘူးဗျာ ကျွန်တော်က မေးတာ အကောင်းပါပဲဗျာ အဲဒါကို သူတို့က ဘလော့ရေးတော့ တင်းသွားတာပေါ့ဗျာ အစကတော့ ကောင်းကောင်းပြန်ပြောမလို့ပါပဲ ဒါပေမယ့် သူတို့က လာကောတော့ ကျွန်တော်လဲ နဲနဲ စိတ်ပေါက်သွားလို့ပါ ကျွန်တော်က တကိုယ်တော် ဘလော့ပါ အဲဆိုက် ကားက အယ် မှားလို့ ဆိုဒ်က အများနဲ့ပါ အောင် မြင်မှုဆိုတာ နောင် ဘ၀ အတွက် မပါပါဘူး လှူ တမ်းမှာ သာ ဒါပေမယ့် လှူတိုင်းလဲ ကုသိုလ် မရပါဘူး။ ကိုယ့် စိတ်ရင်း ကသာ မှန်ပါစေ ကုသိုလ် ရပါတယ်။ ညောင် ပင် လောက်ကြီးလှူ လို့ စိတ်စေဒနာ မပါရင် ညောင်ပင်လောက်ကြီးမရပါဘူး ညောင် စေ့လေးလောက် လှူ ရင်လဲ စိတ် စေဒနာ ပါရင် ညောင် ပင်ကြီးလောက်လဲရပါတယ်ဗျာ။ ကဲအဲဒီတော့ ကျွန်တော်က တော့ ဆိုဒ်လေးလုပ်ပြီးတော့ အလှူ လုပ်တာပေါ့ဗျာ ယူတက်တဲ့လူတွေကတော့ ရပါတယ် မယူတက်တဲ့ လူတွေကတော့ မရဘူးပေါ့ဗျာ ပြောချင်တာ ပြောပါ ခံပါတယ် ကဲကဲ ဘလော့အကြောင်းတောင် ကောင်းကောင်မပြောနိုင်တော့ဘူးဗျာ တင်းနေတယ်ခိခိ အဲဒီတော့ အောက်မှာဒေါင်းသွားလိုက်ပါဦးဗျာ နောက် ထပ် တခြား ဆိုဒ်တွေက ထပ်တင်ပေးပါဦးမယ် MediaFire ကတော့ ခက်တယ်ဗျာ တင်ရတာ ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲတော့မသိပါဘူး ဒေါင်းလိုက်ပါဦး အောက်မှာ ဖန်ရှင်တွေ ကြည့်လိုက်ပါဦး အထဲမှာ ပါပါတယ် May 11th, 2012 Computer, Crack, Registry No Comments » Genius For Vista n 7
ကျွန်တော် အစကတင်ပေးလိုက်တာက XP အတွက်တင်ပေးလိုက်တာပါ အခုတော့ Vista နဲ့7အတွက်ပါ လိုက်ရှာပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ MediaFire ကလဲတင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ အားလုံးအဆင်ပြေအောင် လိုက်ရှာပြီးလိုက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်က XP ပဲသုံးတော့ အဲဒါအတွက်အရင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ နောက် ကျရင်တော့ Ubuntu ပဲသုံးတော့မယ်ဗျာ အဆင်ပြေအောင်လို့ပါ Error နဲတယ်လို့ပြောသံကြားပါတယ်ဗျာ အဲဒါကြောင့်သေချာ လေ့လာပြီး သေချာသုံးပါဦးမယ်ဗျာ XP ပဲတင်ပေးပြီး တခြား ၀င်းဒိုးတွေမတင်ပေးလို့ မဖြစ်ပါဘူး လေဆိုပြီးတော့ ရှာပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါ MediaFire ကလဲ တင်ပေးထားပါတယ် ပြန်ရသွားလို့ပါပဲ May 11th, 2012 Anti-Virus, Update No Comments » Offline Update
ဒါလေးကတော့ ကိုယ့်စက်မှာသွင်းထားတဲ့ Anti-Virus Update တွေရှာလို့ရတဲ့ နေရာတနေရာပဲဖြစ်ပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီကောင်လေးက ဘယ် Update ကိုမဆို ရယူနိုင်ပါတယ်နောက်တော့ အခြားသော software တွေကိုလဲရယူနိုင်ပါတယ် တော်တော်လေးကိုတော့ တန် ဖိုးရှိပါတယ် အဲဆိုဒ်လေးက ကဲကဲ အောက်မှာ လင့်လေးတွေပေးထားပါတယ် Offline Update အတွက်ပါ အင်တာနက် ဆိုင်မှာသုံးပြီးတော့ ဒေါင်းပေါ့ဗျာ……
နောက်ထပ် တခြားသော software update တွေနဲ့ Security နဲ့ပက်သက်တဲ့ software တွေရယူနိုင်ပါကြောင်း နောက်တော့ မသိသေးသူများ သိအောင် ပြန်လည်ပြောပြရပါတယ်ဗျာ… May 11th, 2012 Computer, Registry No Comments » Genius Error ဖြေရှင်းနည်း For Xp
ကျွန်တော်တို့ တခါ တလေ Window ကို Update လုပ်ရင်းနဲ့ ဗျာ Setup တခုကြလာပါတယ် ကိုယ့်ကွန်ပျူတာကို အမြဲ Update လုပ်ချင်သူတွေအတွက်ပါ။ ကျွန်တော် တောင် တခါက မသိတက်တုံး ကွန်ပျူတာ စကိုင် ခါစ အရွယ် ငါးနှစ်လောက်ကပေါ့ဗျာ ကွန်ပျူတာ ကိုင်းရင်းနဲ့ အမဲ ရောင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်လေ အဲဒါနဲ့ နဲနဲ ကလိလိုက်တာ ၀င်းဒိုးပါပြုတ်သွားတယ်ဗျာ အဲဒါနဲ့ပဲ ၀င်းဒိုးပြန်တင် လိုက်ပါတယ် အဲဒါနဲ့ ဆိုင်သွားပြတော့ အဲဒီ ၀င်းဒိုး Genius Error ဆိုလို့ အဲဒီ Reg ဖိုင်လေး ကိုဖြည်ထည့်ပေးလိုက်တာပါ လုံးဝပဲ Black Screen မဖြစ်တော့ပါဘူး အဲဒါနဲ့ ပဲ ကျွန်တော် လဲရှာတာပေါ့ဗျာ တနေ့ တော်တော် ကြွမ်းကြွမ်းကြင်ကြင် သုံးတက်လာတဲ့အချိန်မှာ လိုက်ရှာတော့တွေ့တာပေါ့ဗျာ တွေ့တော့ ရှဲတာပေါ့ဗျာ ရှဲ တော့ယူတာပေါ့ဗျာ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်လဲ ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်ဗျာ အဲဒါနဲ့ပဲ ၇ီးစရာဘလော့တခုဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်က ပျော်ပျော်နေတက်တာ ခွင့်လွှတ်ပေးပါဗျာ အမြဲ ပျော်ပျော်နေတက်ပါတယ်ဗျာ အဲဒီတော့ အမြဲ ပြဿနာရှာခံရပါတယ် ကိစ္စမရှိပါဘူး အရင်ဘ၀က ၀ဋ် လိုက်တယ်လို့ပဲခံစားပြီးကြိတ်မှိတ်ခံစားလိုက်ပါမယ် နောင် ဘ၀ဆိုတဲ့ အခါကျရင်တော့ မနွဲ့ စတမ်းခံပေတယ်……. လူမိုက်နဲ့ လူမိုက်အားပေးလေးတွေရေ……. ကဲကဲ မကောင်းတဲ့လူအကြောင်းပြောရတာ လက်တိတ်ပါတယ်ဗျာ။ ကဲကဲ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါဦးဗျာ MediaFire ကနေပြီးတော့တင်မလို့ပါပဲ ဒါပေမယ့် အကောင့်ပြောင်းလိုက်တာ ဟက်ကင်းထိခံထားရတဲ့အကောင့်ကနေပြီးတော့ပြောင်းလိုက်လို့ပါ နောက်တော့ အကောင့်ပြောင်းလိုက်တာကို မေ့သွားလို့ပါဗျာ ကဲကဲ Minus ကအရင်ယူလိုက်ပါဦးဗျာ
May 11th, 2012 Uncategorized No Comments » သိချင်ခဲ့သော ကိစ္စ တခု
ကျွန်တော့်ကို ဧပြီ လ ၃ရက်နေ့ မြန်မာအချိန် ၉နာရီခွဲလောက် မှာ စွတ်ဆွဲ ထားတာပါ သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကို စွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ် အချိန်အတိအကျတော့မသိရပါဘူး ဒါပေမယ့် အက်မင်တွေ နောက်တော့ လာလည်တဲ့လူတွေ သိအောင်မေးချင်ပါတယ် ကျွန်တော့်ကို စွတ်ဆွဲခဲ့တယ် နောက်တော့ ကျွန်တော် လုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ မန်ဘာတွေကို တောင်းပန်ခဲ့တယ်ဗျာ။….. သူတို့ ပြောတာ သူတို့ နိုင်းဆိုဒ်မှာ ကျွန်တော် မဟုတ်တာတွေတင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဗျာ နောက်တော့ ဘယ်လိုတင်ပါ့မလဲနော် ကျွန်တော်လဲ Pro တယောက်မဟုတ် နိုင်းဆို တာ ချစ်သူမြို့တော် ကစ သိခဲ့တယ် အဲဒီဆိုဒ်လုပ်မှ အက်မင် လုပ်တာ Function တွေကို လိုက်ပြီး ကလိတာလဲမရှိ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်က အဲဒါတွေကို တက်မှာလဲဗျာ အဲဒါကိုတောင် ကျွန်တော် လုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောခဲ့သေးတယ်ဗျာ ဘယ်မှာလဲ သက်သေ ဘယ်မှာလဲ တင်ခဲ့တဲ့ ပုံနဲ့ စာတွေ ဘယ်မှာလဲ ဗီဒီယိုတွေ ပြစမ်းပါဦး သားတွေရယ် မင်းတို့ တိုက်တာကလဲကွာ So Funny ပါလားကွာ ဟာသ ကားထပ်တောင် မင်းတို့ အဖြစ်အပျက်က ရယ် ရတယ်ကွာ သောက်ရှက်မရှိ အပြင်မှာ မင်းတို့ ငါ့ကိုအဲလိုတွေပြောကြည့် ငါမင်းတို့ ကို တရားစွဲပြစ်မယ် အကုန်လုံးကို အက်မင်တွေ ကလဲ သောက်သုံး တဇတ် မှ ကိုမကျဘူးလေ အထောက် အထားမရှိပဲ တရားသွားဆွဲပါတယ်ဗျာ ကဲ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ အထောက် အထားမရှိ တရား ပဲ တရားဆွဲလို့ သူတို့တောင် ပြန်အဖမ်းခံရဦးမယ်ဗျာ သူများကို ပြောရင် ကိုယ် နောင် ဘ၀မှာ ပြန်ခံစားရတက်တယ် နိုင်ငံ ခြားကို သွား ဗုဒ္ဒရဲ့ တရားဒေ သနာတွေကို မနာရ တရားကို မသိ ပိုက်ဆံဘယ်လို ရှာမလဲဆိုတာပဲ သိတဲ့ကောင်တွေ…… မင်းတို့လို ပြန်စွတ် ဆွဲလို့ ရတယ် သေသပ်အောင် ငါလုပ်ပြလို့ရတယ် ရှင်းတယ်နော် မင်းတို့လို အထောက်အထားမရှိမဟုတ်ဘူး။ အခုဟာက ဘယ်မှာလဲ သက်သေ ကဲပြလေ ခွေးတွေက မပြနိုင်ပဲ စွတ်ဆွဲတယ် ကျွန်တော် အသက်ရှိနေသ၍ အဲဒီလို စွတ်ဆွဲခံရတာကို လုံးဝ ကျေနပ်မည် မဟုတ်ပါ။ နောင် ဘ၀ မှာ မစွတ်ဆွဲ ခံရအောင်လဲ တရားများများ ထိုင်ပြီး ကိုယ့်အပြစ် ကို ကိုယ် စင်အောင်ဆေး ကျပါ……… အသုံး မကျတဲ့ အိုင်ပီတောင် မဖမ်းတက်တဲ့ အက်မင်တွေ ခန့်ပြီး ကိုယ့်ဟာကို အထင်ကြီးအောင် လာလုပ်မနေနဲ့ မင်းတို့လုပ်ရပ်တွေက မရှိဆင်းရဲသားတွေကို လှူလိုက်တာက မှ ကုသိုလ်ရမယ်……. မင်းတို့ ရဲ့အပြစ်တွေလဲ ကျေပါဦးမယ် အက်မင် ငဖွတ် များ……. မည်သူ့ကိုမှ သောက် ဂရုမစိုက်လို့ ဤဘလော့ကို တင်လိုက်သည်……. ကျွန်တော် အမြဲ တမ်း ဝေ့၀ိုက်ပြောတက်ပါတယ် ဒါပေမယ် အခုတော့ ဒဲ့ပဲ ပြောလိုက်ပါ့မယ် heartshot.shot@gmail.com ===> (ဇင်ငြိမ်းဦး) tayelay98@gmail.com ===> (ပြည့်ဖြိုးသော်) ထွက်ချင်တယ် ဟုပြောသော်လဲ မထွက်တဲ့ ကောင်လေး….. koko007korea@gmail.com === koko007korea နာမည်တော့အတိအကျမသိပါ sexyghostylay ဆိုလားမသိဘူးဗျ အဲဒါမေ့နေတယ်ဗျာ နာမည်ကတော့ (ထားဝယ်သားလေး) ဆိုလားပါ Porn ဆိုဒ်ကို အဓီက ထောင်ထားပါတယ်….. အဲဒီလေးရောက်ပဲသိပါတယ်ဗျာ koko007korea@gmail.com ကတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သိပါတယ် ကျွန်တော့်ကိုပြောတဲ့ အထဲမှာမပါပါဘူးဗျာ။ အတိုက်အခံမဟုတ်ဘူးနော် တကယ်သိချင်တာဗျာ ငှဲငှဲ သိရင်ပြောသွားပါဦး ( ) ဖြင့်ရေးသောသူများသည် RIP မဟုတ်ပါပေလား :haha
May 11th, 2012 Uncategorized No Comments » သတင်းကောင်းပါ ဒါပေမယ့် ဘယ်အချိန်သတင်းဆိုးဖြစ်မလဲ ????
ကျွန်တော်ရေးခြင်တာကတော့ နည်းပညာအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး ဘလော့ဂါတွေအတွက်ပါပဲ အခု SKY Net ဟာဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော် သိသလောက်အချိန်ကတော့9ရက်နေ့မှာ နေပြည်တော်ကို Proxy မလိုအောင်သူတို့ပြုပြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကောင်းတဲ့အလားအလာပါပဲ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်သုံးတဲ့လိုင်းမလို့ပါပဲ ။ မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်တို့ အများဆုံးသုံးတာ Sky Net လို့လဲထင်ပါတယ်။ အဲလိုမှ မဖွင့်ရင်လဲ အင်တာနက် သုံးရကျိုးမနပ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ ကျွန်တော် အခု Proxy ဖြုတ်သုံးလိုက်တာ ရတော့ရနေတော့ ဘလော့အများကြီးတင်ပေးပါ့မယ်။ အရင်က Proxy နဲ့သုံးနေရတော့ နဲနဲ အလုပ်တော့သိပ် မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာ ရေးတော့ရေးဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် Proxy သုံးတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ကျွန်တော် တခုကြားဖူးတာကတော့ အရင်တခါ Proxy မလိုပဲ Browser ကိုဖွင့်လို့ရပါတယ်။ အဲဒီ ဖွင့်လို့ရတဲ့ အချိန်က မြန်မာနိုင်ငံကို အရေးကြီးနိုင်ငံခြားသားလာတယ်လို့ ပြောသံကြားတယ်ဗျာ အခုရော ဘယ်လို လုပ်ထားလဲတော့မသိပါဘူး။ အခုအချိန်အနေအတွင်းတော့ သတင်းကောင်းပေါ့ဗျာ။ အမြဲပွင့်သွား၇င်တော့ ကျွန်တော် အမြဲဘလော့ရေးလို့ရတာပေါ့ဗျာ မပွင့်ဘူးဆိုရင်တော့ ဘလော့ရေးတဲ့ ကြိမ်းနှုန်းက နည်းသွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါ ဘလော့အဖြစ်ရေးပေးလိုက်ပါတယ် ကျွန်တော့်ဆိုဒ်ကိုလာ နေတဲ့ လူတွေထဲမှာ Sky Net သုံးတဲ့လူရှိရင်ပွင့်အောင်လို့ပါ အခုလောလောဆယ်တော့အကုန်ပွင့်ပါတယ်လို့ သတင်းကောင်းအဖြစ် ပြောလိုက်ရပါတယ် ဒါကတော့ အပေါ် ကအကြောင်းအရာနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်အရင်တုန်းက သုံးခဲ့တဲ့ Myanmaritpalace@gmail.com ကိုဖြတ်လိုက်တာကြာပါပြီ အဲဒါကြောင့် ဆိုဒ်ပြောင်းရင်းကနေပြီးတော့ ညီနေမင်းနဲ့ ပြဿနာ ဖြစ်တာပါပဲ အဲဒါကိုလဲသိအောင်ထည့်ရေးပေးလိုက်ရပါတယ် May 11th, 2012 Computer, Hacking No Comments » သူများကွန်ပျူတာကို ပိတ်တဲ့နည်း နောက်တနည်း
c:\_>runas /netonly /user name\_administrator “shutdown /s /m\_\_computername /t 00 ကုတ်ကို copy ကူးယူလိုက်ပါ ပြိးတော့ note pad ကိုဖွင့်လိုက်ပါ note pad ထဲမှာ pasteပြီးတော့ user name နေရာမှာ ကိုယ့်ရဲ့ computer name ကိုထည့်ပေးပါ ပြီးတော့ computername နေရာမှာ Shutdown ချမယ် Computer name ကိုထည့်ပေးပါ ပီးတော့ t 00 နေရာမှာ Shutdown ကျမယ် အချိန်ကို သတ်မှတ်ပေးရမှာပါ ချက်ခြင်းကျစေခြင်တော့ 00 လို့ထားပါတယ် ပီးတော့ File အောက်နားက Save As ကိုရွှေးလိုက်ပါ name နေရာမှာ Shutdown.bat လို့ရေးပီး Save လိုက်ပါ .bat ဖိုင်လေး တစ်ဖိုင်ကျလာပါလိ့မ်မယ် အဲ့ဒါလေးကို Double Click နှိပ်လိုက်ပါက အစီအစဉ် ပြီး မြောက်သွားပါပြီ မကောင်းတဲ့ ပညာရပ် တစ်ခု ဖြစ်နေတော့ အခတ်အခဲကြုံရင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဆက်လက်ပီးတော့ လေးလာကြပါ ပြန်လည် မေးမြန်းခြင်းခွင့်မပြုပါ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ထားတာအောင်မြင်ပါတယ်။
May 11th, 2012 CMD, Computer, Hacking No Comments » တခြားကွန်ပျူတာကို ပိတ်ပစ်မယ်ဗျာ
အရင်ဆုံး cmd ကိုဖွင့်လိုက်ပါ ပီးတော့ net view ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ပြီးတော့ ကိုယ်ပိတ်ပစ်ခြင်တဲ့ ကွန်ပျူတာရဲ့ နာမည်ကိုမှတ်လိုက်ပါ ပီးတော့ shutdown -i ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ box လေးတစ်ခု ကျလာပါလိမ့်မယ် Add ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ပိတ်ခြင်တဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ နာမည်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ ဥပမာ computer7ပေါ့ဗျာ ပီးတော့အောက်နားလေးမှာ ဘာလုပ်မလည်း restart လုပ်ပစ်မလား shutdown လုပ်ပစ်မလား ရွှေးလိုက်ပါ Warn users of the action ကိုအမှန်ခြစ်ပေးပြီး အောက်နားမှာ shutdown ချမယ် seconds ကိုသပ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ် ဒါပေမယ့် အဲ့လိုလုပ်လိုက်ရင် လူသိမှာပေါ့ဗျာ ဒါကြောင့် warn users of the action ကို အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပါ အောက်နားလေးမှာ Opction အောက်နာလေးမှာ တစ်ခုခုကိုရွှေးလိုက်ပါ ပီးတော့ OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ခဏကြာစောင့်ကြည့်လိုက်ပါ မကျဘူးဆိုရင်တော့ နောက်တစ်ခုကို ထပ်ရွှေးပေါ့ဗျာ Comment ဆိုတာလေးကို လည်း တွေ့မှာပါ အဲ့နားလေးမှာ I Hack Your Computer Now . Your Computer Will Be Shutdown After 10 Second . So Sorry . အဲ့လိုချိန်းခြောက်စာလေးရေးပြီးတော့ အပေါ်က Shutdown Time ကို 10 Second ပေးလိုက်ပေါ့ဗျာ အတိုမှတ်နည်းလေးပါ cmd >> shutdown -i >> Add >> Computer name >> OK စမ်းလို့ရလို့တင်လိုက်တာပါ မရရင်မတင်ပါဘူး Page 1 of 1512345Next ›Last »
Let’s Hack Cafezee
Cafezee ကို hack ကြရအောင်ဗျာ.(ဒါများ လွယ်လွယ်လေး လို့ ပြောကြမယ် ထင်တယ် [...]
အကောင့်ဟောင်းထဲမှ သူငယ်ချင်းများကို အကောင့်သစ်ထဲပြောင်းအပ်မယ်
ဒီ တစ်ခါတော့ ကျွန်တော်က Gtalk အသုံးပြုနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် နည်းပညာတစ်ခုလေး [...]
ကျွန်တော် ဆိုဒ်တွေလဲ မနဲတော့ပါဘူးဗျာ ဟိုရွှေ့ ဒီရွှေ့လုပ်နေရတာလဲ အဲဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော်လိုက်ဆုံစမ်းနေတာပေါ့ဗျာ တနေ့တော့ [...]
Recycle Virus Cleanner
Genius For Vista n 7
cheap guild wars2gold on အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာအောင်ကျော်မြင့် on အကောင့်ဟောင်းထဲမှ သူငယ်ချင်းများကို အကောင့်သစ်ထဲပြောင်းအပ်မယ်Harry on Let’s Hack Cafezee
Copyright © Cyber Coder It Share Site - Just another WordPress site
This theme is sponsored by Chevys Restaurants LLC Corporate Office along with Kerrygold logo, West Virginia University, and business listings site